192.168.8.1 - Amboary ireo faritra maty WiFi
Amboary ny faritra maty WiFi - A Faritra maty WiFi amin'ny ankapobeny dia habaka iray ao an-tranonao, trano, toeram-piasana, na faritra hafa antenaina hosaronan'ny Wi-Fi, saingy tsy mandeha ao - fitaovana tsy afaka mifandray amin'ny tambajotra. Raha mandray gadget any amin'ny faritra maty ianao - mety hampiasa tablette na smartphone ianao ary hiditra ao amin'ny efitrano misy faritra maty - hijanona tsy hiasa ny Wi-Fi ary tsy hahazo signal ianao. Ny ankamaroan'ny trano dia namboarina talohan'ny Wi -Namboarina i Fi, noho izany dia mety hatsangana amin'ny fomba manelingelina ny Wi-Fi izy ireo. Ny zavatra metaly goavambe toy ny rindrina vy na kabinetra fisie dia mety hanakana ireo fambara Wi-Fi aza.
Fomba hanamboarana ireo faritra maty WiFi
Ireto ambany ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fandrakofana Wi-Fi momba anao.
Afindra ny Router-nao
Raha eo amin'ny zoro iray amin'ny tranonao, trano, na toeram-piasana ny router, ary misy faritra maty eo amin'ny zoron'ny trano fonenanao, andramo afindra amin'ny toerana afovoany vaovao eo afovoan'ny tranonao, trano, na toeram-piasana ny router.
Amboary ny Antenna amin'ny Router anao
Hamarino tsara fa miakatra sy manondro mitsangana ny antena an'ny router tsy misy tariby. Raha manondro marindrano izy dia tsy hahazo ny haben'ny fandrakofana azonao.
Toerana sy famindrana sakana
Raha ny router Wi-Fi anao dia voatazona ankoatra ny takelaka fisie metaly izay mampihena ny herin'ny signal anao. Andramo ny mamerina mametaka ny toerana misy anao raha te hanana tanjaka famantarana mafy ianao ary jereo raha manaisotra ilay faritra maty io.
Miova amin'ny tambajotra Wireless tsy misy farafaharatsiny
Mampiasà gadget toy ny Android na amin'ny SSIDer ho an'ny Wifi Analyzer Mac na Windows hahitana ny tamba-jotra tsy misy tariby tsy feno olona indrindra ho an'ny tamba-jotra Wi-Fi anao, avy eo manova ny toerana amin'ny router hampihenana ny fidiran'ny tambajotra tsy misy tariby.
Mametraha Repeater Wireless
Tokony hametraka repeater tsy misy tariby ianao amin'ny fanitarana ny fandrakofana amin'ny faritra lehibe kokoa raha toa ka tsy misy ny toro-hevitra etsy ambony. Mety ho zava-dehibe izany amin'ny birao na trano lehibe.
Mampiasà Rohy misy tariby hanamafisana ireo faritra maty WiFi
Mety hieritreritra ny hametraka tariby Ethernet an-tserasera mihitsy aza ianao. Ohatra, raha manana fandrakofana tsy misy tariby tsara ianao manerana ny ankabeazan'ny tranonao, saingy toa tsy mahazo signal Wi-Fi ao anatin'ny efitranonao ianao — mety hanana tariby akoho vy ao anaty rindrina ianao. Azonao atao ny mihazakazaka tariby Ethernet avy amin'ny router mankany amin'ny efitranonao, na miaraka amina mpampitohy tsipika herinaratra raha tsy dia maniry ny hahita tariby mandehandeha eny an-dalana ianao, avy eo manangana router tsy misy tariby fanampiny ao anaty efitrano. Mila fidirana Internet tsy misy tariby ao amin'ny efitrano tsy misy teo aloha ianao avy eo.
Raha manana faritry ny maty tsy misy tariby ianao dia mety miankina amin'ny router, ny toerana misy azy, ny mpifanila vodirindrina aminao, ny rindrin'ny trano fonenanao, ny haben'ny habakabakao, ny karazana gadget elektronika anananao, ary ny toerana anaovana zavatra. Ampy izay mety hiteraka korontana, fa ny fitsapana sy ny hadisoana dia hanampy anao hanafoana ny olana.
Ireo faritra maty tsy misy tariby dia tsy sarotra ny mamantatra raha mandeha eo akaikin'ny tranonao, ny birao na ny trano fonenanao ianao. Aorian'ny nahitanao azy ireo dia azonao atao ny manandrana vahaolana isan-karazany & manitsy izay rehetra mitarika ny olana.